in Pricing Guide, News
वर्ल्डलिङ्कले Small and medium-sized enterprises हरुको लागी विभिन्न आकर्षण इन्टरनेट प्याकेजहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ। यस अन्तर्गत वर्ल्डलिङ्कले SME Prime र SME 24 प्याकेज अन्तर्गत Small and medium-sized enterprises हरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआइरहेको छ।
यहा हामि बिसेशगरि SME Prime को बारेमा चर्चा गर्न गैरहेको छौ।
तपाईले SME Prime अन्तर्गत १० Mbps र 20 Mbps को स्पिड भएको इन्टरनेट पाउनुहुनेछ। यस अन्तर्गत प्रति महिना इन्टरनेट सेवा शुल्क फरक फरक भएपनि शुरुवाती सेटअप शुल्क भने समान रहेको छ। १ महिने प्याकेज, ३ महिने प्याकेज र १२ महिने प्याकेज अन्तर्गत जडान शुल्क पनि फरक फरक रहेकोछ।
यदि तपाइले प्रतिमहिनाको दरले शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइले प्रति महिना रु. २,००० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै यदि तपाईले प्रति ३ महिनाको दरले शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकै चोटी रु. ५,४०० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईले एकैचोटि १२ महिनाको शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकै चोटि रु. २०,००० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा एक बर्षको लागी शुरुमै भुक्तानी दिनुभयो भने तपाइलाई इन्टरनेट अलि सस्तो पर्न जान्छ र बर्षमा तपाईको ४ हजार कम पर्न जान्छ।
यदि तपाइले प्रतिमहिनाको दरले शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइले प्रति महिना रु. ३,००० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै यदि तपाईले प्रति ३ महिनाको दरले शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकै चोटी रु. ८,१०० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईले एकैचोटि १२ महिनाको शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले एकै चोटि रु. ३०,००० /- तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सुबिसु एनसेल वर्ल्डलिङ्क वेबसर्फर ब्रोडलिङ्क नेपाल टेलिकम डीसहोम भायनेट क्लासिक टेक
ब्रोडब्याण्ड, दूरसञ्चार र आईसीटी नीति अब एउटैमा गाभिने निश्चित